Indlu emangalisayo kwiVilla Collina entle, eCalabria - I-Airbnb
Indlu emangalisayo kwiVilla Collina entle, eCalabria
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMads
UMads unezimvo eziyi-81 zezinye iindawo.
Chitha iholide yakho kunye nosapho lwakho okanye kunye nabahlobo kwindlu yethu ethandekayo kwenye yezona ndawo zintle zase-Itali. Indawo yethu ibamba iindwendwe ukuya kuthi ga kwisithandathu kwaye inikezela ngamathuba amaninzi elangeni lase-Italiya. Ubumelwane bunendawo enkulu ekwabelwana ngayo ichibi, iinkundla zentenetya kunye nezitulo zelanga ezigcinwe ngaselwandle lweMeditera (ikhilomitha nje eyi-1 ukusuka kwindlu) kunye nommandla wengingqi unemibono emininzi enomtsalane kunye neendawo zokutyela ezithandekayo zasekuhlaleni. Iintlawulo ezisetyenziswayo (i-0,5 euro nge-kWh nganye) ehlawulwe emva kokuhlala.
Ikhaya lale mihla elakhiwa njengenxalenye yeprojekthi enkulu yezindlu egubungela amakhaya angaphezulu kwekhulu e-Badolato, ikhaya lethu elincinci leeholide zosapho libone uphuculo oluninzi ngaphakathi nangaphandle, elenza labalasele phakathi kwezinye izindlu ezikuloo ngingqi.
Umrhumo wokucoca uquka ukucocwa kwendlu yonke xa umka, ukurenta iitawuli, ilinen yokulala kunye nokuhlamba ezi zinto emva kokusetyenziswa. Inkcitho ye-Utility (umbane, amanzi, igesi) ibalwa njenge-euro eyi-0,5 nge-kWh nganye kwaye ihlawulwe ekupheleni kokuhlala kumntu wethu wasekhaya. (Khumbula ukuba nceda ucime iiyunithi ze-A/C xa ungekho endlwini).
Indlu ibekwe kwindawo ebizwa ngokuba yiVilla Collina (abahlali balapha bayibiza ngokuba yilali yaseDanish). Yaqala njengeprojekthi yolwakhiwo lwezindlu eyaqalwa ngabemi baseScandinavia abathenga induli kwaye bakha izindlu ezingaphezu kwe-100. Namhlanje uninzi lwabo lungabanini baseScandinavia kunye negcuntswana laseTaliyane. Ngexesha lasehlotyeni uninzi lwezindlu ziyaqeshwa kwaye uya kukwazi ukubaleka kwiintlanga ezahlukeneyo ngasecaleni lephuli ekwabelwana ngalo. Abaninimzi bayinxalenye yombutho oqesha abasebenzi abafana noonogada base pool kunye nabasebenzi basezitiyeni abajonga iiyadi zezindlu neendawo ezingqongileyo. Kukwakho neofisi engaphambili enomsebenzi olungele ukunceda abahlali ngayo nayiphi na imiba enokuthi ivele (kwaye banengcebiso ezintle malunga nezinto ezibonwayo zasekhaya okanye zokutyela!)
Umbuki zindwendwe ngu- Mads
Student, who loves music, collects CD's, and enjoys second hand selling+buying.
Sirenta ngaphandle eDenmark, ke (ngelishwa) asikwazi ukubulisa iindwendwe zethu ekufikeni kwethu. Ukwenza oko, sisebenzisana nomlingane wasekhaya wasekhaya.
Sithetha isiDanish kunye nesiNgesi kwaye iqabane lethu lomninimzi lasekhaya lithetha kakuhle ngesiDanish, isiNgesi kunye nesiTaliyane.